Qarax Ismiidaamin ah oo saaka ka dhacay Magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan. – SBC
Qarax Ismiidaamin ah oo saaka ka dhacay Magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan.
Posted by Webmaster on January 24, 2012 Comments
Sida ay ku waramayaan warar ka imanaya magaalada Baladweyne xarunta gobolkaaasi Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in gaari laga soo buuxiyay waxbaayaba qarxa uu ku qarxay afaafka hore ee xarunta gobolka ee Magaaladaasi.
Ilaa iyo iminka lama xaqiijin karo in hadii khasaare uu halkaasi ka dhashay qaraxaasi, waxayna wararka qaar sheegayaan in goobta uu galay gaariga qarxay ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan wafdigii DKMG ah ee halkaasi gaaray maalmo ka hor.
Sida ay xaqiijinayaan Saxafiyiin madaxbanaan oo ku sugan Baladweyne Gaariga qarxay ayaa waxa uu ahaa noociisa gaadiidka Dadweynaha ee loo yaqaan Hoomeey islamarkaana laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa uuna watay nin naftiis hure ah.
Howlgalo ayaa ay ku dhaqaaqeen ciidamada Itoobiya iyo kuwa Soomaalida ah ee halkaasi ku sugan, iyagoona soo rogay Bandow hakad geliyay dhaq dhaqaaqii dadka iyo ganacsiga deegaanada ka agdhow xarunta gobolka.
Majiraan sidoo kale Faah faahino kale oo soo baxaya Saraakiisha gobolka ku sugan, iyo cid weli sheegatay masuuliyada qaraxani .
Xaalada Baladweyne ayaa cakiran iyadoona maalmihii ugu dambeeyay ay soo laalaabanayeen qaraxyada lala eeganayo ciidamada Itoobiya iyo kuwa Soomaalida ah.